Sidee looga saaraa malaxda iyo fareemooyinka laga bilaabo nambarka maadada 'Excel' - Gofumed
Sidee looga saaraa malaxaha iyo hyperlinks laga bilaabo lambarrada Excel
Juunyo, 2011 Internet iyo Blogs, dhowr
Marar badan markaad nuqul ka samaysato internetka si ay u noqoto Excel, nambarku wuxuu u eg yahay kala qaybsanaan kumanaan. Inta aan ka bedelayno qaabka unugta lambarka, haddana weli waa qoraal sababtoo ah Excel ma fahmi karo kumanaan qaybood oo kala duwan ka dib lambarka wuxuu leeyahay lambarrada 6, taas oo ah, in ka badan hal milyan.
Waxaan doonayaa inaan ku tuso kiiska shaxda internetka ee tirakoobka, kaas oo Waxaan la hadlay dhowr maalmood ka hor:
Eeg sida nuqulku / udbaadha u shaqeynayo, ilaa iyo inta aanay u soo dirin unugyada la isku daray. Laakiin lambarradaasi waxay u eg yihiin qoraallada.
Ka bixitaanka iyaga ayaa qaadanaya saddex talaabo oo fudud:
1 Sii unugyada qoraalka.
Tan waxaa lagu sameeyaa adiga oo dooranaya qoraalka, guji midigta iyo xulashada qaabka unugyada. Kadibna waxaynu sameynaa isbedelka.
2 Raadi oo beddel fanka.
Tani waxaa la kiciyaa furaha Ctrl + b haddii ay dhacdo Excel ee Spanish. Dooro ikhtiyaarka si aad u ogaato jumlada (,), iyo bedelka sanduuqa beddelka ah. Kadib badhanka Cusbooneysii dhammaan.
Natiijadu waxay tahay in dhammaan fooshaada la tirtiri doono. Ka taxadar, sababtoo ah xulashada waa inay ku jirtaa oo kaliya lambarrada aan dooneyno in aan bedelno si aysan u waxyeeleynin qaybo ka mid ah feylka halkaasoo ay jiraan faylo oo sax ah.
3 Sii unugyada qaabka tirada.
Kadibna talaabo 1 ayaa soo noqnoqda, laakiin tilmaamaya in qaabkani yahay lambar.
Sidee looga qaadaa hyperlinks-ka unugyada kala duwan
Sidaa daraadeed waxaa jira siyaabo kale laakiin waan ku lumay sababtoo ah waxay ku taal cirifka carrabka ee isla jimicsiga. Midba midka hal mar ma aha dhibaatada maxaa yeelay waxa la sameeyaa badhanka midigta, laakiin si loo sameeyo unugyo dhowr ah lama qaban karo ama la la daabacay oo la soo koobay, haddaan weydiino qiimaha macmalka Hyperlink marwalba wuu socon doonaa sababtoo ah waxaa lagu geliyey unugyada sida xml oo aan ku jirin qoraalka.
Maxaa la sameyn karaa waa in la nuqulo wax kasta oo daneynaya, si aan u helno tiir bannaan oo leh xulasho khaas ah, si loo xariiro xiriirka.
Unugyadaasi waxay lahaan doonaan sheekada, laakiin maaha hyperlink, kuwaanna waa la daabicin karaa oo laga dhigi karaa qiimaha unugyada asalka ah.
Post Previous«Previous Isticmaalaha Internetka Isticmaalayaasha Internet
Post Next 5 daqiiqado kalsooni loogu talagalay blog Matías NeiffNext »
5 Jawaab ah "Sidee looga saaraa malaxaha iyo hyperlinks laga bilaabo tirooyinka Excel"
Fer isagu wuxuu leeyahay:
Waxay ii adeegtay mahad badan. Ma ahan sida dhaman YouTube-ka oo dhan
Salaan Waxaan u baahanahay inaan ka takhaluso kombiyuutarka anoo xajinaya 0 dhamaadka jajab tobanlaha, laakiin markii aan dalbado habka wax loo baray waa laga saaraa. 2.950,30 ee sii jiraya 295030. Qaab noocee ah ayaan u isticmaalaa? Ama nidaamkee ayaan codsadaa? Thanks !!
Taasi waxay kugu dhacday sababtoo ah halkii aad ka tagi lahayd meel nadiif ah, meesha aad dooraneyso sababta ay u noqoto mid la bedelayo, waxaad meel u dhigtaa meesha barafka.
Hadda waa inaad doorataa meesha bannaan ee kor ku xusan iyo hoosta aad ka tagto nadiif ah, oo waxay tirtiri doontaa meelaha.
ps eeg oo waxaan sameeyay tallaabooyinka 1,080,480 waxaanan joogayaa 1 080 480 waxaanan rabay 1080480, maxaa waa inaan sameeyo?